लेजेन्ड फुटबलर रोनाल्डिल्होको सम्पत्ति जफत, पार्सपोर्ट पनि खाेसियाे, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
एजेन्सी । ब्राजिलका लेजेन्ड फुटबलर रोनाल्डिल्होको सम्पत्ति जफत भएको छ । कर तथा जरिवाना नतिरेको आरोपमा ब्राजिलका पूर्व फुटबल स्टार रोनाल्डिल्होकाे सम्पत्ति जफत गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमहरुले जनाएका छन्।
खबरअनुसार ब्राजिलियन स्टारको ब्राजिलियन र स्पेनिस पार्सपोर्टहरु पनि खोसिएको छ । रोनान्डीन्होलाई पोर्टो अलेग्रेस्थित आफ्नो लेक हाउसमा अवैध संरचना बनाएको भन्दै २० लाख ६० हजार पाउन्ड जरिवाना गरिएको थियो ।
रोनाल्डोको सम्पत्ति ८ करोड देखि १० करोड पाउन्डसम्म भएको अनुमान छ ।